Daawo: Wiil Asalkiisa Soomaali Lagu sheegay oo Weerar ka Gaystay Jaamacada Ohio ee Dalka Maraykanka | Entertainment and News Site
Home » News » xogwaran » Daawo: Wiil Asalkiisa Soomaali Lagu sheegay oo Weerar ka Gaystay Jaamacada Ohio ee Dalka Maraykanka
Daawo: Wiil Asalkiisa Soomaali Lagu sheegay oo Weerar ka Gaystay Jaamacada Ohio ee Dalka Maraykanka
daajis.com:- Nin Asalkiisu yahay Soomaali ayaa weerar ku qaaday jaamacadda Ohio ee dalka Maraykanka, halkaa oo uu ku dhaawacay sideed ruux kahor inta aan la dilin.
Ninka oo da’diisa lagu sheegay 18 sano jir ayaa ardey ahaa jaamacada Ohio oo ay dhigtaan inkabadan lixdan kun oo arday. Sideed qof ayaa ku dhaawacantay weerarka ka dib markii gaari uu jiirsiiyay dad ku sugnaa jaamacadda gudaheeda.
Ninkaasi ayaa markaasi ka dib gaariga ka degay wuxuuna billaabay inuu middi ku weeraro dadkii kale. Waxaa markii dambe toogasho ku dilay booliska oo Jaamacadda Ohio gaaray.
Maamulka jaamacadda ayaa sheegay in hadda xaaladdu ay deggan tahay. Waxaa kaloo ay xaqiijiyeen in howlgalikii ciidamada uu dhammaaday. Dadka dhaawacmay waxaa la sheegayaa in xaaladooda caafimaad wanaagsan tahay, cisbitaalka ay ku jiraan.
Lama oga in falkan uu la xiriiro arrimo argagaxiso hase yeeshee dowlada Maraykanka saraakil u hadashay ayaa sheegay inay baaritaanku sameyn doonaan.